Muran ka taagan cidda maamuleysa hey'adda daryeelka macaamiisha ee Mareykanka - BBC News Somali
Muran ka taagan cidda maamuleysa hey'adda daryeelka macaamiisha ee Mareykanka
Image caption Mick Mulvaney
Dalka Mareykanka waxaa uu muran ka taagan yahay ciddii maamuli lahayd hey'adda daryeelka macaamiisha ee dalkaasi, kadib markii madaxweyne Donald Trump uu waxba kama jiraan kasoo qaaday magacaabistii hore, isagoona xilkaasi u magacaabay shakhsi aad ugu dhaw isaga.
Ninka uu magacaabay madaxweyne Trump oo lagu magacaabo Mick Mulvaney ayaa hey'addaasi mar ku tilmaamy inay aysan aheyn wax quuman.
Afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in Mr Mulvaney oo horay usoo noqday madaxii miisaaniyadda ee dalka Mareykanka uu sharci ahaan yahay midka sida ku meel gaarka u noqon doono agaasimaha hey'addaasi.
Haweeneyda xilkani loo magacabaay markii hore oo la yirahdo Leandra English ayaa hadda dooneysa inay hor istaagto go'aanka madaxweyne Trump, oo tallaabo sharci ah laga qaado waxa ay ugu yeertay faragelinta dowladda ay ku heyso waaxda dhaqalaaha ee Mareykanka.
Dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xaruntani oo ku taala magaalada Washington DC, si ay walaac uga muujiyaan tallabaadni.